Ikwu ugwo maka Trabzon's New Bus Station | RayHaber | raillynews
HomeTurkeyBlack Sea Region61 TrabzonNro maka thezọ Ọgba Ọhụrụ nke Trabzon
11 / 05 / 2020 61 Trabzon, Foto, General, Black Sea Region, Ụzọ Awara Awara, Ụgbọ okporo ígwè Tire, Isi akụkọ, Turkey
nro maka trabzon ohuru ohuru
Mmetụta nke ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ ahụ, nke bụ otu ọrụ nke Trabzon Metropolitan Mayor Murat Zorluoğlu na-akwado mkpa, ezubere ịmalite mgbe ọ bụla na njedebe nke May. Ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ a, nke ga-ezute ụkọ n'obodo, a na-atụ anya ije ozi n'ebe ọhụrụ ya na njedebe nke 2021.
Lọ ọrụ ụgbọ ala, nke chọrọ ka ndị bi na Trabzon bibie ya ọtụtụ afọ wee bụrụ ọnya na-agba ọbara, ga-emesị nwee echiche dabara adaba nke obodo ahụ. Okwu ndị a banyere nkọwa nke oru ngo a ka ndị ọrụ obodo Mịnịstrị nke Mịnịstrị na - ahụ maka Science Science: Emepụtara atụmatụ ụgbọ ala ụgbọ ala ọhụrụ iji nye ndị mmadụ Trabzon na ọdụ ha ga - eji ọnụ ala dị ka ihe na - akwụsị n'ihi eziokwu ahụ bụ na ọdụ ụgbọ ala dị adị enweghị ike igbo mkpa na - arị elu.
AKW TRKWỌ AKWAFKWỌ AKW INKWỌ N'THEBỌ URBAN
Ebumnuche a bụ ime ka okporo ụzọ dị n’obodo ahụ nwee nnukwu ọdụ ụgbọ oloko a dị na 30.144,85 m² plot na Anadolu Boulevard, district Ortahisar, Sanayi Mahallesi. Site na usoro nhazi ọtụmọkpọ ọhụụ nke okporo ụzọ a, a na-echekwa ya ka ọ belata njupụta nke obodo na ịnye ọrụ n'ọdụ ụgbọ njem anaghị akwụsị akwụsị na mpaghara ọwụwa anyanwụ - ọdịda anyanwụ, ugwu na ndịda. Buildinglọ ahụ nwere mpaghara ihe niile nwere 9.259,07 m platform nwere usoro ụgbọ ala maka ugbo ala 28 na mpaghara ndị njem na-eche 1.863,23 m². E mere mkpa nke ụlọ ahụ na obodo ahụ dị mkpa, enyere ya imezigharị Değirmendere nke dị na ọdịda anyanwụ, na mpaghara ndị gbara gburugburu, bụ ndị na-abaghị uru, bụ ndị e tinyere na nhazi ala ahụ na Nazlọ alakụba H. Nazif Kurşunoğlu nke dị n'ebe ugwu.
UMU EGO N’IME ANYI NIILE VEHICLE
A na-enyocha ngwugwu ahụ na mpaghara abụọ na mmezi ahụ, akụkụ ndị dị n'akụkụ ebe ugwu na ebe ọwụwa anyanwụ jikọtara ọnụ maka ndị ọrụ na-abata, ebe ndịda na ndịda ọdịda anyanwụ chere ihu iyi ahụ ka a na-ahapụ ụgbọ ala na mgbasa ozi. Enyere ụgbọ njem ọha na mpaghara ahụ na bọs obodo na obere obere ọdụ ụgbọ ala dị na Anadolu Boulevard. Enyere ụzọ ụgbọ ala etiti na ebe ụgbọala 16 dị na Gümüşhane Service Mpaghara Ọpụpụ si n'okporo ụzọ Ayakkabçiler Sitesi, nke dị na ndịda ụlọ ahụ. Na mgbakwunye na nke a, ebumnuche iji belata ibu nke ụgbọala n'okporo ụzọ mgbanaka ahụ site na ijikọ tagzi na ọdụ ụgbọ elu nke abụọ e mepụtara n'etiti Ayakkabçiler Sitesi Street na Anadolu Boulevard nwere ụgbọala nkeonwe maka ugbo 104 na ebe ọrụ na-adọba ụgbọala maka ụgbọala 20.
EGO ANYI ZARA ANYA
Ezubere nke ọma ma dịkwa obosara ka ọ gbanwee ikuku ejikọtara ọnụ, nke na-agwụ ike na ọchịchịrị, ma ebum n’obi ya iji mepụta ihe onyonyo n’uche ndị ọrụ batara na mbara ala ebe ihe atụ mara nke dọrọ n’obodo abụọ. Na mgbakwunye, site na iji mpempe ụlọ n’elu ihe ngosi dị iche iche, enyere ụlọ ahụ ebe ebe nchekwa. Buildinglọ ahụ, nke nwere ebe ala dị ihe dị ka mpụmita 5.000. Ka ndi ọrụ wee mee njem nke ọma, a na-ekpebi ụzọ na-agafe agafe ma doo anya gbagoro na bọs bọs ndị ahụ. Ejiri mpaghara azụmahịa dị ka cafeteria, nri nri, ebe a na-atụrụ ndụ na ebe ntụrụndụ dị n'akụkụ ya. Ya mere, ebumnuche ya igbo mkpa dị iche iche nke ndị ọrụ na-eji obere oge, oge na ogologo oge na ọdụ.
Ọ B ANR SU AB SUR A UTBARA EGO
N’igosipụta na oru ngo nke ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ a ga-arụzu na Trabzon, onye isi obodo nke Obodo Metropolitan Murat Zorluoğlu kwuru, “Interlọ Ọrụ Obodo Mbara Obodo abụwo nsogbu dị mkpa nke ghọrọ ọnya ọbara nke obodo a n'afọ ndị na-adịbeghị anya. Dịka ị nwere ike ịma, ọdụ ụgbọ ala nke ugbu a enweghị ike igbo mkpa, mana o kwekọghị na Trabzon dịka onyoonyo. Mmeghari ohuru nke ọdụ ụgbọ ala, nke e wuru afọ iri anọ gara aga, so na nkwa anyị ịhọrọ. Ozugbo anyị banyere n'ọchịchị, anyị mere nsụgharị. Anyị ga-ebuga ọdụ ụgbọ ala site na ọnọdụ dị ugbu a gaa mpaghara Galerciler Site na Ọrụ Science anyị. N'oge a, anyị arụchaala ọrụ anyị, nke bụ ihe mbụ ị ga-eme iji rụọ ọdụ ga-adị mma maka obodo a. Anyị chọrọ iwu ọdụ ụgbọ ala ọgbara ọhụrụ nke ga-egbo mkpa ma dabara na Trabzon. Anyị bu n’obi ịkwaga ọdụ ụgbọ ala ọhụrụ anyị na njedebe nke 40 ”.
Nbudata Ntughari ohuru Malite site na Akçaray ka Ogwe Bus Bus
Ụzọ ndị ọhụrụ ga-adị na njem ụgbọ njem na Eskişehir
Gwa Istanbul obi maka 6 New Metro Line
5 New Metro Line na Istanbul Ụgwọ na May
Trabzon Deputy Canalioğlu, Trabzon Diyarbakir jụrụ okporo ụzọ ụgbọ okporo ígwè
Gọvanọ nke Trabzon siri ike maka echiche ya na ebe a na-achọta trabzon.
Trabzon adịghị ewepụ ikpe na-ezighị ezi a Trabzon logistics center ọrụ
Trabzon Proposal maka Erzincan-Trabzon okporo ụzọ ụgbọ oloko
Trabzon Deputy Kaya, jụrụ banyere oru ngo nke Trabzon!
Dozọ Ọhụrụ na ANTRAY Kwụsị imepe Ọdụ ụgbọ ala
Ọdụ ụgbọ ala mpaghara ọhụrụ dị mma maka Çameli
Ụlọ Bus nke Harran Na-akwadebe maka Imeghe
Turkey obi Akwụsị New Mega Projects mara ọkwa
Kütahya Mpaghara Germiyan - Central Campus Trolleybus Project to Tender in 2015…
Ụgbọ njem ndị na-aga n'ihu na Electronic Fare Collection System na Malatya